Bhuku raZvakazarurwa 8:1-13
Chisimbiso chechinomwe chinovhurwa (1-6)
Kuridza mabhosvo mana ekutanga (7-12)
Matambudziko matatu anoziviswa (13)
8 Gwayana+ parakavhura chisimbiso* chechinomwe,+ kudenga kwakabva kwati zii kweinenge hafu yeawa. 2 Ndakabva ndaona ngirozi nomwe+ dzinomira pamberi paMwari, uye dzakapiwa mabhosvo manomwe. 3 Pakabva pauya imwe ngirozi yainge yakabata mudziyo wekupisira rusenzi wegoridhe ikamira pedyo neatari,+ uye yakapiwa rusenzi zhinji kwazvo+ kuti ipise paatari yegoridhe+ yakanga iri pamberi pechigaro cheumambo panguva yaipiwa minyengetero yevatsvene vese. 4 Utsi hwerusenzi hwaibva muruoko rwengirozi hwakakwidza huchienda pamberi paMwari pamwe chete neminyengetero+ yevatsvene. 5 Asi ngirozi yacho yakabva yangotora mudziyo wekupisira rusenzi, ikauzadza nemumwe moto wepaatari, ikakanda moto wacho panyika. Uye kwakava nemabhanan’ana nemanzwi nemheni+ nekudengenyeka kwenyika. 6 Ngirozi dziya nomwe dzaiva nemabhosvo manomwe+ dzakabva dzagadzirira kuaridza. 7 Yekutanga yakaridza bhosvo rayo. Pakabva pava nechimvuramabwe nemoto zvakasangana neropa, uye zvakakandwa panyika;+ chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvenyika chakatsva, uye pakatsvawo chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvemiti, pamwe chete nezvinomera zvese zvakasvibirira.+ 8 Ngirozi yechipiri yakaridza bhosvo rayo. Chimwe chinhu chakaita segomo guru raibvira moto chakabva chakandwa mugungwa.+ Uye chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvegungwa chakachinja kuva ropa;+ 9 chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvezvisikwa zvipenyu* zviri mugungwa chakafa,+ uye chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvezvikepe chakaparadzwa. 10 Ngirozi yechitatu yakaridza bhosvo rayo. Uye nyeredzi huru yaibvira semwenje yakawa kubva kudenga, ikawira pachikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvenzizi nepazvitubu zvemvura.+ 11 Nyeredzi yacho inonzi Kamuti Kanovava. Chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvemvura chakabva chavaviswa, uye vanhu vazhinji vakafa nemvura yacho nekuti yakanga yavaviswa.+ 12 Ngirozi yechina yakaridza bhosvo rayo. Chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvezuva chakabva charohwa+ pamwe chete nechikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvemwedzi nechikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvenyeredzi, kuti chikamu chimwe chete pazvikamu zvazvo zvitatu chive nerima+ uye kuti chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvemasikati chirege kuva nechiedza, uye kuti usiku huitewo saizvozvo. 13 Zvino ndakaona gondo richibhururuka nepakati pedenga, richiti nenzwi guru: “Mune nhamo, mune nhamo+ imi vanogara panyika, mune nhamo nekurira kuchaita mabhosvo asara engirozi nhatu dzava kuda kuridza mabhosvo adzo!”+
^ Kana kuti “zvezvisikwa zvine mweya.”